QURBA-JOOGTA SPORTS KA GOBOLKA JUBADDA HOOSE – KISMAYU OO DOORTAY GUDDOOMIYE
Shir khadka telefoonka ah oo ay isugu yimaadeen ciyaartooydii hore ee Gobolka Jubadda Hoose ee ay magaalo madaxdiisu tahay Kismayu ayaa wuxuu dhacay taariikhdu markii ay ahayd April 20, 2013. Shirkan oo ahaa midkii ugu horeeyey noociisa oo ay bahdan yeelato ayaa ahaa mid aad u xiiso badnaa oo aad mararka qaar u malaynaysid in ciyaartooyda cuslaatay ay wali kuwada ciyaarayaan garoonkii Waamo ee magaaladda Kismayu. Waxaa ugu qosol badnayd markii uu Mahamaadi Bakari oo naadi Munishiibiyo u qaadan jiray lambarka 9aad uu Maxamed Muse Jabros kula kaftamay inuu lambar 5 kii uu caanka ku ahaa boorka ka soo jafjafto, odayaashu faan badanaa!
Haddaba ujeedadda kulankan ayaa wuxuu salka ku hayey sidii loo horumarin lahaa sports ka gobolka isla markaasna loo mideyn lahaa maskaxda iyo muruqa qurba-joogta gobolka, waxaa kaloo la isla meel dhigay in il gaar ah lagu hayo midnimadoodana laga shaqeeyo akhyaarta wali gudaha ku jira dadaaladda badana sameeyey una dhabar adeygay dhibka iyo inay sii horumariyaan, tartanana u qabtaan da’ yarta soo koreysa ee ah mustaqbalka gobolka.
Waxaa si gaar ah uu shir- guddoonkii shirku uu uga codsaday Madaxa Zone ka 4aad ee Guddiga Olympic da Somaliyeed (GOS) – Maxamed Muse Cabdi – Jabros inuu ka qaybgalayaasha shirka uu sharaxaad kooban ka siiyo GOS iyo waxa ay qaabilsan tahay isla markaasna sida ugu haboon ee GOS ugaga qayb qaadan karto horumarka sports ka gobolka.
Madaxa Zone ka 4aad ee GOS wuxuu si waafi ah u dhigdhigay su’aashii la weydiiyey wuxuuna balan qaaday in GOS ay qayb libaax ka qaadan doonto horumarinta qaybaha kala duwan ee dhammaan ciyaaraha fudud, kubadda kolayga, laliska, dabaasha, lagdinta, kubadda miiska, malaay dabashadda, iyo waliba tartanka cunidda qubadda iwm.
Gabagabaddii shirka ayaa waxaa halkaas lagu doortay in Eng. Abdisamed Sheik-Qasim oo horay ugaga tirsanaan jiray naadigii Dawladda Hoose ee Kismayu iyo kii Muqdishu ee Xamar uu noqdo Guddoomiyaha Bahda Sports ka Qurba-joogta Gobolka Jubadda Hoose – Kismayu. Guddoomiyuhu wuxuu ku booriyey in garoonka Waamo la dhiso laguna daro qayb VIP ah oo loogu talo galay “HALL OF FAME” oo ay noqonayaan dhammaan ciyaartooydii gobolka soo martay gude iyo dibad ba. Wuxuu kaloo ku daray in horumar lagu gaari karo isku kalsooni, is aamin, waxtar iyo shaqo badan.
Ciyaartooydii hore ee halkaas ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa:
Diini Nur Abdiqadir, Khaliif Shire –Rike, Abdi Haq, Mahamaadi Bakari, Abdirahim Shino, Cumarey Ali, Ahmed Osman Gedi, Mohamud Baraan, Abdirizak Marshale, Ahmed Aluu, Mohamed Abdi Asale, Ahmadey Mahad, Dhuubo Huruuse. Waxaa kaloo khadka telefoonka ku jiray Bide Shire, Ahmed Ciise, iyo Cumari Faruur. Waxaa mahad badan loo soo jeedinayaa xiriiriyihii, qabanqaabiyihii iyo fikirkii Mohamud Yare oo ahaa jiray laf dhabarkii naadigii Muuska (Ente Banane) iyo xulkii gobolka Jubadda Hoose, waxaa kaloo mahad mudan dadkii kale ee mudadda badan la soo shaqeeyey Mohamud Yare sida Abdi Haq, Khalif Rike, Jabros, Dhubo, Abdisamed, iyo waliba Maryan Yarey oo aan maalintaas fursad u helin inay shirka ka soo qayb gasho.
Xiriirkani wuxuu noqon doonaa mid intaas ka sii balaaran.
Guddiga Qabanqaabadda Shirka.